AlShabaab iyo Shacab kudagaalamay hiiraan | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta AlShabaab iyo Shacab kudagaalamay hiiraan
AlShabaab iyo Shacab kudagaalamay hiiraan
Dagaal sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa wuxuu ka dhacay maanta degaano ka tirsan Gobolka Hiiraan gaar ahaan degaanka Buq-aqable, sida ay xaqiijiyeen masuuliyiinta Gobolkaasi oo aan la xiriirnay.
Dagaalkan oo la isku adeegsaday Hub kala duwan ayaa wuxuu u dhaxeeyay Al-shabaab iyo dadka degaanka, kadib markii ay murmeen.
Inta la xaqiijiyay Dagaalkan waxaa ku geeryootay 2 qof oo xoola dhaqato ah, halka Al-shabaabna uu soo gaarey khasaare dhimasho iyo dhaawac, sida ay xaqiijiyeen dadka degaanka qaarkood oo la hadlay radio baidoa
Isku dhacan ayaa ka dambeeyey kadib markii dadka reer mi’yiga ah ay ka biyo diideen codsi uga yimid Al-shabaab ee ahaa in ay bixiyaan xoolo iyo dhalinyaro ay si qasab ah ku dagaal geliyaan.
Degaanka Buq-aqable ayaa khiyaas ahaantii wuxuu 90-KM dhanka Galbeed kaga beegan yahay magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan.
Al-shabaab iyo dadka degaanka ayaa dhawaan dagaal khasaare dhaliyay ku dhexmarey degaano dhanka Galbeed kaga began magaalada Baladweyne kadib markii ay gubeen gaadiid ku rarnayd badeeco ganacsi, taasi oo ay dadka ka soo horjeesteen.